TOPミャンマー語 | w2is　新型コロナウィルス関連商品通販ショップ-自宅でコロナ検査
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် PCR စစ်ဆေး‌သောကိရိယာ
ကမ္ဘာပေါ်၌ ပျံ့နှံ့လျှက်ရှိသော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရှိမရှိ စစ်ဆေးသောကိရိယာ၊ ဆေးရုံမသွားချင်သူများ မိမိ၏ ၀န်ထမ်းများအား ပုံမှန်စစ်ဆေးမူပြုလုပ်ချင်သူများအတွက် လွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင်နိုင်မည်။
သက်သာသောကုန်ကျမှုစရိတ်ဖြင့် စစ်ဆေးမှုရယူခြင်းဖြင့် မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက်သောစိုးရိမ်မှုများမှလွတ်‌မြောက်ပါမည်။ အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် စစ်ဆေးသော အခါ ကုန်ကျမှုစရိတ်သက်သာမည့်အပြင် အဖွဲ့အစည်း အတွက်လည်လုံခြုံစိတ်ချရမည်။
လွယ်ကူစေခြင်း ဤစစ်ဆေးကိရိယာသည် မိမိကိုယ်တိုင်တံတွေးကို ထည့်စရာဗူးအတွင်းထည့၍ ထိုဗူးအားပြန်ပို့ပေးရန်ပို့ပေးထားသောအိတ်၌ထည့်၍ အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းစသောလွယ်ကူမှုကြောင့် လူကြိုက်များရခြင်းဖြစ်သည်။
တံတွေးကို PCR တိုက်ရိုက်စစ်ဆေးမှုမဟုတ်ပဲ DNA အက်စစ်ကို ထုတ်ယူပြီး PCR စစ်ဆေးမှုကိုလုပ်ဆောင် သော‌ကြောင့် ပိုမိုတိကျသောစစ်ဆေးမှုရရှိနိုင်မှု
PCR စစ်ဆေးမှုသည် ဗိုင်းရပ်စ်ဗီဇကိုပြန့်ပွားစေ၍ ရှာဖွေပေးသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းမှ ဆဲလ်ကိုစုဆောင်းခြင်း၊ ပါးစပ်မှထွက်သောတံတွေးကို စုဆောင်း၍စစ်ဆေးမှု ဖြစ်သည်။ PCR စစ်ဆေးမှုဖြင့် Postive အဖြေထွက်ပါက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရမည်။
စမ်းသပ်လိုသည့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပဋိပစ္စည်း (Antibody) ကိုအသုံးပြု၍ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ထူးခြားသောပရိုတင်းကို ရှာဖွေသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ PCR စစ်ဆေးခြင်း၏ အဖြေရလဒ်နှင့်နှိုင်းယှဥ်ပါကမှန်ကန်သောအဖြေရလဒ်၏ ရာခိုင်နှုန်းနည်းပေမယ့် မိနစ် ၃၀ခန့်ဖြင့် ရလဒ်၏အဖြေကို သိရှိနိုင်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပမာဏလိုအပ်သောကြောင့် ရောဂါလက္ခဏာမပြသောအခါ စကရင်စစ်ဆေးမှုမလုပ်နိုင် (စကရင်စစ်ဆေးမှုဆိုသည်မှာ အဖွဲ့လိုက်စစ်ဆေးမှုကို ဆိုလိုသည်။)
ယခင်က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ကူးဆက်ခံရမှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ ပဋိပစ္စည်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကိုရိုနာမကူးဆက်သောရလဒ်အဖြေထွက်ပေမယ့်လည်း ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်သမားနှင့် လူမှုဖူလုံရေး၀န်ကြီးဌာန သည် ထိုစစ်ဆေးမှုကို အသိအမှတ်မပြု။
စစ်ဆေးကိရိယာ၀ယ်ယူမှု ဘဏ်ငွေလွှဲစနစ် ခရတစ်ကဒ်ဖြင့်ငွေပေးချေနိုင်သည်
စစ်ဆေးကိရိယာ‌ရောက်ရှိမည်။ ၁လပိုင်းမှစတင်၍ အခါအားလျှော်စွာပို့ဆောင်မှုကို လုပ်ဆောင်ပေးမည်။
ကတော့ပုံစံခွက် တံတွေးထည့်ခွက်ကိုတပ်ဆင်၍ တံတွေးကို 1ml မှ 2ml အတွင်းစုဆောင်းပြီးနောက် ကတော့ပုံခွက်ကိုဖယ်ရှားရမည်။
တာရှည်ခံဆေးရည်လောင်းထည့်ခြင်း စုဆောင်းထားသော တံတွေးထည့်ခွက်အတွင်းသို့ တာရှည်ခံဆေးရည်ကို လောင်းထည့်ရမည်။
လျှောက်လွှာပုံဖြည့်နည်း လျှောက်လွှာပုံံစံစာရွက်၌ လိုအပ်သောအချက်အလက်များဖြည့်၍ နံပါတ်စဉ် စတစ်ကာကပ်ပြီး ပြန်ပို့ပေးရန် ပို့ဆောင်ထားသောစာအိတ်၌ထည့်ရမည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ပတ်သက်၍ သင်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ဖြေရှင်းချင်ပါသလား
အလုပ်ကိစ္စအတွက်အပြင်ထွက်ရသောကြောင့် အိမ်၌ရှိသော မိမိမိသားစုအား မိမိကြောင့်ရောဂါကူးစက်ခံရခြင်းကိုစိုးရိမ်မှု
ကုမ္ပဏီ၀န်ထမ်းများအား PCR ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ချင်ပါသော်လည်း ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားမှုကြောင့် သက်သာသောကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် စစ်ဆေးမှုများကို ရှာဖွေသူများအတွက်
မိမိအိမ်၌ရှိသော သက်ကြီးရွယ်အို ကလေးငယ်များရှိသည့်အတွက် မိသားစု၀င်အားလုံး၏ PCR ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုကိုခံယူချင်သော မိသားစုအတွက်
စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန် အိမ်အပြင်သို့မထွက်ချင်သူများထို့အပြင် ဆေးစစ်ဌာနတွင်လူဉီးရေများသောကြောင့် ရောဂါကူးစက်ခံရမှုကို စိုးရိမ်မှုရှိသူ
နာကျင်မှုမလိုလားသော PCR စစ်ဆေးမှုခံယူချင်သူများ
¥4,180 (税込） お買い物カゴに追加
ထုတ်ကုန်အမည် စမ်းသပ်ကိရိယာနာမည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် PCR စစ်ဆေးမှု၊ တံတွေးစုဆောင်းစစ်ဆေးမှုကိရိယာ
ထုတ်လုပ်သူ TOA Industry Co.,Ltd.
စစ်ဆေးမှုအမည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် PCR စစ်ဆေးမှု
စစ်ဆေးမှုနည်းလမ်း စာပို့စနစ် (ပြန်ပို့ရန်ပို့ပေးထားသော စာအိတ်ထဲ၌ထည့်၍ ပို့ဆောင်ခြင်း)
စစ်ဆေးချက်အဖြေအသိပေးအချိန်ကာလ စစ်ဆေးရေးဌာနသို့ တံတွေးစုဆောင်းထားသောဗူး ရောက်ရှိပြီးနောက် ၃နာရီအကြာ ■အသုံးပြုမှုကာလ：ထုတ်လုပ်သည့်နေ့မှစ၍ ၁နှစ်
ယခု၀န်ဆောင်မှုမှာ စစ်ဆေးချက်အဖြေမှ ခန့်မှန်းလို့ရသောအချက်မှာ လူကြီးမင်းထံမှလက်ခံရရှိသောတံတွေးမှ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရှိမရှိကိုသာသိရှိနိုင်မည်။
ထို့အပြင် PCR စစ်ဆေးမှု၏ထူးခြားချက်အနေဖြင့် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရန် ပေးထားသောတံတွေး၌ ဗိုင်းရပ်ပိုးရှိနေပေမယ့် မရှိသောအခြေအနေဖြင့်ဖော်ပြခြင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိနေသော်လည်း မရှိသောအခြေအနေကိုဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ အကယ်၍စစ်ဆေးချက်အဖြေ၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခြင်းခံရသော စစ်ဆေးချက်အဖြေထွက်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ကူးစက်မှုရှိမရှိကို မိမိနေထိုင်သော ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ဌာန၌ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
ကိုယ်အပူချိန်များသူ၊ ရောဂါလက္ခဏာရှိသူ၊ ရောဂါရှိသူနှင့်အနီးကပ်ထိတွေ့သူ၊ သံသယရှိသောသူသည် PCR စစ်ဆေးမှုနှင့်အကျုံးမ၀င်ပါ။
တံတွေးကိုမစုဆောင်းမှီအနည်းဆုံး ၁နာရီအတွင်း စားသောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ပလုတ်ကျင်း သွားတိုက်ခြင်များမပြုလုပ်ရ။
ထိုလုပ်ရပ်များကြောင့် စစ်ဆေးမှုအတွက် စွမ်းဆောင်မှု နိမ့်ကျသွားနိုင်သည်။
ထို့အပြင် လည်ချောင်းနှင့်ပတ်သက်သော သကြားလုံး၊ လည်ချောင်းဖြန်းဆေး၊ ပီကေ၊ ပိုးသတ်ဆေးပါသော သွားတိုက်ဆေး၊ CPC （ကလိုရင်း）ပါ၀င်သောကြောင့် မှန်ကန်သောစစ်ဆေးမှုကို မရရှိနိုင်ပါ။
ယခု PCR စစ်ဆေးမှုလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် တံတွေးကို စုဆောင်းခြင်းဖြင့် စစ်ဆေးမှုကိုလုပ်ဆောင်သည်။
ပိုမိုတိကျသော စစ်ဆေးမှုကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် စုဆောင်းထားသောတံတွေးကို ချက်ချင်းပို့ဆောင်ပေးပါ။
တံတွေးကိုအတင်းအကြပ်မထွေးထုတ်ပဲ ပုံမှန်အတိုင်း နဲနဲခြင်းစီထုတ်ရမည်။
စုဆောင်းထားသောတံတွေးကို ချက်ချင်းမပို့ဆောင်နိုင်ပါက ရေခဲသေတ္တာထဲသို့ထည့်၍သိမ်းထားရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ် ပါသည်။
လောင်ကျွမ်းမှုအန္တရယ်ရှိသောကြောင့် မီးနှင့်နီးကပ်သော နေရာ၌မထားရန်။
နေရောင်တိုက်ရိုက်ကျသောနေရာ၊ အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းစ မြင့်သောနေရာ၊ နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ကျသော ကားအတွင်း၌ ကျေးဇူးပြုပြီး မထိန်းသိမ်းပါရန်။
ယိုစိမ့်သောနေရာ၊ စိုစွတ်သောနေရာ၊ မီးလောင်လွယ်သောအနီး၌ သုံးစွဲမှုမပြုရ။
စမ်းသပ်ကိရိယာအား ခလေး၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆန်တို့၏ လက်လှမ်းမမှီသောနေရာ၌ အသုံးပြုခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းကို လုပ်ဆောင်ရမည်။
တာရှည်ခံဆေးရည် မျက်လုံးထဲ၀င်ခြင်း၊ အရေပြား၌ထိခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာပါက ချက်ချင်းလုံလောက်သောရေဖြင့် ဆေးကြောပြီး ထူးခြားမှုများ ဖြစ်လာပါက အထူးပြုဆရာ၀န်နှင့်တိုင်ပင် ဆွေးနွေးပါ။
ခလေးငယ်များ၏ လက်လှမ်းမှီသောနေရာ၌ မထားပါရန်။
ခလေးငယ်မှ မှားယွင်း၍ သောက်သုံးမိပါက ချက်ချင်း ဆရာ၀န်၏ဆေးကုသမှုကို ခံယူရမည်။
အသုံးပြုပြီးပစ္စည်းကိုစွန့်ပစ်ရာတွင် မိမိရပ်ကွက်မှ ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။
သတ်မှတ်ထားသော ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းဉပ‌ဒေနှင့် ပတ်သက်သောအချက်အလက်
ဖြန့်ဖြူး‌ရောင်းချသူ UNSTYLISH Co.,Ltd.
လိပ်စာ Tokyo, Shinagawa, Minami Ooi 2-11-4
စမ်းသပ်ကိရိယာစျေးနှုန်း၌မပါ၀င်သောကုန်ကျစရိတ် ပို့ဆောင်ခ၊ ၀ယ်ယူခွန်၊ ၀န်ဆောင်မှုစရိတ် (ပေးပို့ခ၊ ငွေလွှဲခ)
လျှောက်လွှာသက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် မှာယူပြီး ခုနှစ်ရက်အတွင်းသတ်မှတ်သည်။ မှာယူပြီး ခုနှစ်ရက်အတွင်း ငွေပေးချေမှုမရှိပါက မှာယူမှု အလိုအလျှောက် ဖျက်သိမ်းခြင်းခံရမည်။
အရည်အသွေးမမှီသောပစ္စည်း အရည်အသွေးမမှီ‌သောပစ္စည်းရောက်ရှိလာပါက ကျေးဇူးပြု၍ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။ ငွေပေးချေပြီးနောက် ၀ယ်ယူမှု ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပစ္စည်းပြန်ပို့ခြင်း လက်မခံနိုင်ကြောင်း (အရည်အသွေးမမှီသော ပစ္စည်းမှလွဲ၍) ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်ထားပေးပါရန်။ ※ ၇ရက်အတွင်း ဆက်သွယ်မလာပါက ပစ္စည်း လဲလှယ်မှု ကို လက်ခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
အိမ်အရောက်ပို့ပေးမှု အချိန်ကာလ ငွေ‌ပေးချေမှုရရှိပါက ၇ရက် (ရုံးဖွင့်ရက်အတွင်း) ပို့ဆောင်ပေးမည်။ ၀ယ်ယူသူမှ လက်ခံရရှိမှုနေ့ရက်ကို သတ်မှတ်ထားသော်လည်း သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း မရောက်နိုင်သောအခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
ငွေပေးချေရမည့်သတ်မှတ်ချိန် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ အတည်ပြုစာပို့ပြီးနောက် ၇ရက်အတွင်း သတ်မှတ်သည်။
ပြန်ပေးပစ္စည်း ပြန်ပို့ရန်သတ်မှတ်ချိန် ပစ္စည်းရောက်ပြီးနောက် ၇ရက်အတွင်းပို့ဆောင်ရမည်။
ပြန်ပေးပစ္စည်းပို့ဆောင်ခ အရည်အသွေးမမှီသောပစ္စည်းဖြစ်ပါက မိမိတို့ကုမ္ပဏီမှ အကုန်ကျခံမည်။
2021年1月28日 / 最終更新日時 : 2021年1月28日 wondersquared 新型コロナウィルス関連商品
Copyright © w2is　新型コロナウィルス関連商品通販ショップ-自宅でコロナ検査 All Rights Reserved.